रुकुम ९, फागुन
रुकुममा एक विद्यार्थी बिद्यालयमै निर्घात रुपमा कुटिएका छन् । सदरमुकामकै यमुना नन्द नमुना मावि शेरिगाउँमा कक्षा ७ मा अध्यनरत १३ वर्षिय शेरिगाउँकै अशोक शर्मा अभ्यास शिक्षण गरिरहेका सोही विद्यालयको कक्षा १२ मा अध्यनरत देववहादुर बुढाको निर्घात कुटपिटमा परी घाईते हुनुभएको हो । देववहादुरको कुटपिटबाट अशोकको कान, ढाड र अनुहारमा चोट लागेको छ । आईतबार अपरान्ह सवा ३ बजेको समयमा अन्तिम पिरियड पढाई भैरहेका बेला आफुमाथि कुटपिट भएको अशोकले बताउनुभएको छ । देववहादुरले पढाईरहेको बेला अनुमति लिएर कक्षा कोठामा पस्ने वित्तिकै कहाँ गएको थिस यतिबेला सम्म भन्दै गाली गरी आफुमाथि कुटपिट गरेको अशोकको भनाई छ ।
कक्षा कोठामा पस्ने वित्तिकै आफुलाई झापड हानेको र त्यसपछि लात्ति हानेपछि बेञ्चमा ठोक्किन पुग्दा कान, ढाँड, अनुहार लगाएत शरिरका अन्य अंगमा पनि चोट लागेको उहाँले बताउनुभयो । ‘कुटपिटका कारण देव्रे कान कम सुन्ने गरेको छु, कुटपिट भएको अंग देखाउँदै अशोकले भन्नुभयो–अनुहार पनि सुनिएको छ, ढाडमा समेत चोट लागेकाले राम्रो संग बोल्न तथा हिडडुल गर्न सकेको छैन् ।’ विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक दामोदर पौडेलले विद्यार्थीले गल्ति गरेपनि त्यसरी कुट्न नपाईने बताउनुभयो । ‘विद्यार्थीले गल्ति गरेपनि कुट्न पाईदैंन प्रअ पौडेलले भन्नुभयो विद्यार्थी माथि कुटपिट गर्नेलाई कारवाही हुन्छ ।’ यसैविच विद्यार्थी कुटपिट गर्ने देववहादुरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
अशोकको स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट र आफन्तको उजुरीको अवस्था हेरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाईने प्रहरी निरिक्षक थम्मनवहादुर रजालीले जानकारी दिनुभयो । आईतबार अपरान्ह भएको कुटपिट पछि घर पुगेका अशोकले उल्टि गर्न सुरु गरेपछि आईतबार रातिनै उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको अशोककी आमा कालिका शर्माले बताउनुभयो । अशोकलाई उल्टि भैरहेका कारण कानको जालि फुट्यो की भन्ने आशंका गरिएपनि जिल्लामा भएको चेकजाचका क्रममा त्यस्तो नभेटिएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. राजेन्द्र जिसीले बताउनुभयो । कानको भित्रि भागमा चोट लागेको हुन सक्ने भन्दै थप उपचारका लागि अशोकलाई आज काठमाडौं रिफर गरिएको छ ।
कानको भित्रि भागको चेकजाच जिल्लामा नहुने भएपछि रिफर गरिएको डा. जिसीको भनाई छ ।
क्याप्सनः अभ्यास शिक्षणमा आएका छात्र शिक्षकबाट कुटिएका अशोक उपचारको क्रममा जिल्ला अस्पतालको बेडमा